Hoax Ahịa? Mbadamba Iwu nke Ivar | Martech Zone
Dabere na Youtube, a na-etinye vidiyo nke awa 72 kwa nkeji! Ndị ọrụ Twitter tweet 400 nde ugboro kwa ụbọchị. N’ụwa nke juputara na mkpọtụ, ọ na-esiri ike ịnụ ngwaahịa, weebụsaịtị, ma ọ bụ ọrụ. Ọ na-aka sie ike ma ọ bụrụ na ọ nweghị ihe ọ bụla dị iche n’ihe a na-ere ahịa. Kwa ụbọchị, ndị na-ere ahịa na-eche ihe ịma aka ihu iji bulie mkpọtụ ahụ. Na olile anya nke ihe nkpali ihe puru iche, m laghachi na 2009 na ihe odide a na-achoputara Ngwongwo ihe oriri nke Ivar na Seattle, Washington.
Akụkọ Ivar nke Creative Marketing
Ivar Haglund guzobere Ivar, onye ọbụ abụ na Seattle bụ onye wuru akwarium mbụ obodo ahụ. Tọrọ ntọala ụlọ oriri na ọ becauseụ becauseụ ahụ n'ihi na Ivar chere na ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya inye ndị ọbịa nri nke akwarium aafarium. O nyere ụlọ oriri na ọ unusualụ restaurantsụ ya ihe ndị a na-adịghị ahụkebe, na-egosipụta otu n'ime ebe ya mgbe ogologo oge ndị India gachara. Ruo ọtụtụ iri afọ, ọ kwadoro ọrụ ọkụ ọkụ nke mpaghara dị egwu, na-adọta ihe karịrị mmadụ 300,000 n'oge okpomọkụ ọ bụla. Na mpaghara ahụ, Ivar Haglund bụ akụkọ akụkọ.
Mpempe akwụkwọ mmiri n'okpuru mmiri
Ivar's bidoro mkpọsa okpuru mmiri n'okpuru mmiri site na ikwusa nchọpụta nke akwụkwọ sitere na 1950s nke na-enye maapụ mbadamba bọọdụ na onye guzobere ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ ahụ abanyela na Puget Sound. Echere, Haglund lere anya n'ọdịnihu ebe ndị ahịa ga-anya ụgbọ mmiri okpuru mmiri nke onwe ya tinyela bọọdụ mkpọ na ụda iji nweta mkpọsa na mgbasa ozi igwe mmadụ a. Mgbe ahụ, akụkọ gbasara na ndị ọrụ ụgbọ mmiri natara otu n'ime mkpọsa mkpọsa mkpọsa ndị a na ala nke Puget Sound. Mpempe osisi nke e nwetara na-akpọsa ọkwa nke otu clam chowder maka naanị 75 cents ma jiri agba na barnacle chọọ ya mma. E nwetakwara bọọdụ ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ọnọdụ bọọdụ mkpọsa ahụ ezughi iji mee ka ụfọdụ kwenye na ha bụ eziokwu, otu n'ime ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme kacha asọpụrụ na mpaghara Seattle gafere iji gosipụta nchọta ahụ. Paul Dorpat, onye Washington State na-ede akụkọ ihe mere eme na onye a ma ama na-ede akwụkwọ akụkọ n’obodo ahụ, tinyere aha ya n’akwụkwọ ahụ site n’inye nkwupụta iji gosi na akwụkwọ ndị ahụ bụ eziokwu. Echiche ya ọ tụkwasịrị obi, ya na iji nlezianya na-eme atụmatụ ịkụ ihe na nchọpụta nke mmiri adịgboroja a na-etinye n'ụgbọ mmiri, zuru ezu iji mee ka ọha na eze kwenye na mpempe akwụkwọ ndị ahụ dị adị. Iji cheta nchoputa a, Ivar wedatara onu ahia clam chowder ya na 75 cents kwa efere - otu onu egosiri na mgbasa ozi ahu.
Ihe omuma Hoax
Ebumnuche Ivar iji mee ka hoax ahụ na-agba ọsọ ruo mgbe nkwalite mgbasa ozi kwụsịrị, mana wiil ndị ahụ malitere ịpụ mgbe mkpọsa ahụ jidere ọkwa nke ụlọ oriri na ọ leadingụ leadingụ na-eduga. Mgbe a jụrụ ya maka nkọwa gbasara akụkọ a, Donegan kwetara na nchọta ahụ bụ a mgbasa ozi ịre ahịa nke malitere ịka mma karịa ka a tụrụ anya ya. Site na nkwenye a, ụfọdụ ndị ọha na eze malitere ịkatọ ndị isi ụlọ ọrụ Ivar maka ịkwanye mbadamba akwụkwọ na iduhie ọha na eze. Paul Dorpat, onye akụkọ ihe mere eme nke Washington State natakwara okpomọkụ ọha na eze maka igwu egwu na stunt.
Otu stunt siri metụta ala ala nke ụlọ ọrụ ahụ
N'agbanyeghị na-adịru nwa oge ọjọọ mkpọsa, ihe okike ahia okike a gara nke oma! N'ime mkpọsa akwụkwọ mkpọsa mkpọsa, ahịa nke Ivar's clam chowder mụbara site na n'elu 400 percent, na-awụli elu karịa ahịa 60,000 ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga. Dị ka ihe ngosi sitere na isiokwu a, ndị mmadụ na-echeta mkpọsa ahịa ahịa a ma ka na-ekwu maka ya. Achọ ọchụchọ Google Ivar's Undersea Billboards Hoax laghachi na 360,000 pụta.
Etu ụzọ dị mkpa
N’ụzọ doro anya, ezi atụmatụ na igbu egbu mere ka mbadamba bọọdụ nke okpuru Ivar nwee ihe ịga nke ọma. Ihe ndị a bụ ụzọ dị mkpa iji tụlee ::
Enwere arịa anụ ahụ nke nyere ohere maka foto na vidiyo ka eweghara dị ka achọtara ihe ndị ahụ.
Onye ọkọ akụkọ ihe mere eme nke tụkwasịrị obi na onye obodo ahụ kwadoro akụkọ ahụ.
Lọ ọrụ ahụ kwadebere ma nwee ọhaneze na nnwere onwe n'efu site na itinye ego na-akpọsa akụkọ nzuzu na ọnụahịa akwụ ụgwọ.
Akụkọ a dịpụrụ adịpụ ma bụrụkwa ihe a na-ekwenye ekwenye ma ọ dọọrọ uche ndị mmadụ na iche n'echiche.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ndị otu nọ na Ivar gbagoro n'elu ụkpụrụ ahụ. Ọ bụrụ na ị ga - enwe ihe ịga nke ọma, ị ga - adị njikere ime ihe ndị ọzọ na - achọghị ime. Mepụta ihe absurdly elu mma. Nka a hilarious na ọkara nkwenye akụkọ. Edozila ọnọdụ ahụ. Na ahia, ude na-arịgo elu.
Tags: bọọdụ mkpọsahoaxịzụ ahịa hoaxivarsivars billboard hoaxivars ngwa ngwa